“ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ကြီး ကို တည်ဆောက် ကြ သူ များ” | Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
Pure Sunni (Ya Robbae Salle Wasllim Ala Mohamadin)
Welcome to Puresunni ဤဆိုဒ်မှကြိုဆိုပါ၏။
← “ဂျန္နသွလ် ဘကီး မှ အမိုးခုံးများ မဖယ်ရှားမှီ နှင့် ဖယ်ရှားပြီးပုံ”
ဂျဟန္နမ်မီ (ငရဲကျ) နေသော အမျိုးသမီး(၆)ဦး →
“ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ကြီး ကို တည်ဆောက် ကြ သူ များ”
Posted on November 8, 2013	by puresunni
ကုရ်အာန်၊ ဟဒီးဆ် နှင့် အစ္စလာမ့်သမိုင်း ပုံရိပ်
“ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ကြီးကို တည်ဆောက် ကြသူများ”
ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ကြီးကို ခေတ် အမျိုးမျိုး တွင် (၁၂)ကြိမ် တိုင်တိုင် ပြန်လည် ပြုပြင် မွမ်းမံ တည်ဆောက် ခဲ့ကြကြောင်း သမိုင်း မှတ်တမ်း များက ဖော်ပြ နေပါသည်။ မှတ်တမ်း မှတ်ရာ အများ အပြားမှာ ခိုင်လုံသော အဆိုများ မဟုတ် သော်လည်း၊ ခိုင်လုံသော သက်သေ အထောက် အထား မှတ်တမ်း များလည်း ရှိသေးသည်။ အောက်တွင် ကအ်ဗဟ် ကျောင်းတော် ကြီးကို တည်ဆောက် ခဲ့သူများ အားလုံး ဖော်ပြထား ပါသည်။
၂။ ဟဇရသ် အာဒမ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)
၃။ ဟဇရသ် ရှီးသ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)
၄။ ဟဇရသ် အိဗ်ရာဟိမ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) နှင့် ဟဇရသ် အစ္စမာအီလ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)
၅။ အမာလိကာ ပြည်သူများ
၆။ ဂျုရ်ဟွမ် လူမျိုးစု
၇။ ကဆွီး ဗင်န် ကီလာဗ်
၈။ ကူရိုင်ရှ် လူမျိုးစု
၉။ ဟဇရသ် အဗ်ဒုလ္လာဟ် ဗင်န် ဇူဘေးရ် (ရဒွိယလ်လာဟု အန်ဟု) သခင် – ဟစ်ဂျရီ ၆၅ ခု
၁၀။ ဟဂ်ျဂျားဂ်ျ ဗင်န် ယူစွဖ် – ဟစ်ဂျရီ ၇၄ ခု
၁၁။ တူရကီ ဘုရင် မူရာဒ် – ဟစ်ဂျရီ ၁၀၄၀ ခု
၁၂။ ဘုရင် ဖဟဒ် ဗင်န် အဗ်ဒုလ် အဇီးဇ် – ဟစ်ဂျရီ ၁၄၁၇ ခု
View all posts by puresunni →
This entry was posted in သမိုင်း, ဆောင်းပါး, Photos. Bookmark the permalink.
Search : ရှာရန်
ပိုစ်ခေါင်းစဉ်များ စာမြည်းလိုပါက အောက် ဆုံး၌View all posts by puresunni → ကိုနှိပ်ပါ။ခေါင်းစဉ် နှင့် Read more ဖြင့် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။	------------------------- နုတ်ခွန်းဆက်ပါ၏ ------------------------- ဤ၀ပ်ဆိုဒ်သို့လာရောက်ဖတ်ရှု အားပေး သူအားလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
Menses – ဓမ္မတာရာသီသွေး၊ မီး တွင်း သွေးနှင့် ရော ဂါ သွေး များ အ ကြောင်း သိ ကောင်း စ ရာ
ကုရ်အာန် ဘာသာပြန် (၁ မှ ၃၀)
Why Prophet Muhammad Married Aisha When She Was Only 9?
အိဒဒ်ကာလပြီးသည့်နောက် အမျိုးသမီးအား စောင့်ရှောက်ရန်တာဝန်
ကျား၊ မအတူတကွရောနှော နေထိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု/ မပြု
နှစ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော်ခဲ့သော်လည်း တ မန် တော် မြတ် ထိုင် ခဲ့ သောကြောင့် ယ နေ့ တိုင် ရှင် သန် နေ တဲ့ သစ် ပင်
“စလာမ် ဆိုခြင်း “မက္ကရုဟ်” ဖြစ်စေသော အချိန်များ နှင့် “မက္ကရုဟ်” ဖြစ်သူများ”
“တမန်တော် အစ်ဟားက် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) အကြောင်း”
နဗီတမန်တော်ဇကရီယာ (အ) အကြောင်း
တမန် တော်မြတ်(ဆွ)အား နို့ချို တိုက်ကျွေးခဲ့သော ဟလီမဟ် စအ်ဒီယဟ် သခင်မ ၏ နေအိမ်
နဗီတမန်တော်ဆွာလေ့ဟ် (အလိုင်ဟိစွလာမ်) အကြောင်း
“ဝါဒီအတ်လ်ကိုရာ” ရှိ စမူးဒ်အမျိုးအနွယ်တို့၏ အိမ်များ ….
ဟဇ်ရသ် မုအာ ၀ိယဟ် သခင်၏ မျိုးနွယ်
အဗူ စလ်မဟ် (ရဿွီ ယလ္လာဟို အန်ဟု) သခင်
“မိုဟရ်ရမ်လ နှင့် အာရှူရာ ရက်မြတ် အကြောင်း”
“မိုဟရ်ရမ်လနှင့်အာရှူရာရက်မြတ်အကြောင်း နှင့် ရှောင်ကြဉ်အပ်သော လုပ်ငန်းများ”
“မူဟရ်ရမ်လ နှင့် ကရ်ဗလာ” (၁)
“မူဟရ်ရမ်လ နှင့် ကရ်ဗလာ” (၂)
“မူဟရ်ရမ်လ နှင့် ကရ်ဗလာ” (၃)
“ဟဇ်ရသ် အေမာမ် ဟူစိုင်န် (ရဒွိယလ်လာဟု အန်ဟူ) သခင် အလ္လာဟ့်ကို ကျေးဇူး တင်ခြင်း”
“ဆွဟာဗဟ်(ရဒွိယလ်လာဟုအန်ဟွမ်)သခင်ကြီးများ နှင့် စပ် လျဉ်း ၍ ထား ရှိ အပ် သော ယုံ ကြည် ချက် များ”
“ဒုက္ခအခက်အခဲနှင့် ရောဂါမှ ကင်းဝေးစေရန်”
သူခိုးဓါးပြ အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးရန်
အသီးအနှံတို့ အရသာထူးကဲ ပြည့်စုံရန်
တမန်တော်ချုပ်မိုဟမ္မဒ် (စွ) ၏ အထုပ်ပတ္တိအကြောင်း
ရှေးခေတ် မဒီနာရွှမြို့တော် နှင့် မစ်ဂျိဒ်နဗ၀ီ ပုံ
တမန်တော်ဇကရီယာ (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) သခင် ၏ ကဗရ်
တမန် တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်ဟိ ၀စလ္လာမ်) အား နို့ချို တိုက်ကျွေးခဲ့သော ဟလီမဟ် စအ်ဒီယဟ် သခင်မ ၏ နေအိမ်
ဂျူမုအဟ် နေ့ “စူရဟ် ကဟဖ် ဖတ်ခြင်း”
“တမန် တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်ဟိ ၀စလ္လာမ်) ၏ ရောင်ဇာတော် ၏ သမိုင်း” (၂)
ဂျဟန္နမ်မီ (ငရဲကျ) နေသော အမျိုးသမီး(၆)ဦး
“ဂျန္နသွလ် ဘကီး မှ အမိုးခုံးများ မဖယ်ရှားမှီ နှင့် ဖယ်ရှားပြီးပုံ”
“တမန် တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟု အလိုင်ဟိ ၀စလ္လာမ်) ၏ ရောင်ဇာတော် ၏ သမိုင်း” (၁)
ရောင်ဇွာတော် (သို့) မြင့်မြတ် သန့်ရှင်းသော အခန်းအာ တည်ဆောက်ခြင်း”
လူတစ်ယောက်ရဲ့အရှက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းစေမယ့်ကိစ္စကို ဖုံးဖိပေးနိုင်တဲ့သူကို အရှင်မြတ်က ကေယာမတ် တရား စီရင်မယ့်နေ့မှာထိုသူ့ရဲ့ အရှက်နဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်
နဗီတမန်တော်အစ္စမာအီးလ် (အ) အကြောင်း
မီးကျင်းရှင် အတ်စွဟာဗေ အွခ်ဒူးဒ်
မီးကျင်းရှင် အတ်စွဟာဗေ် အွခ်ဒူးဒ် (၂)
တမန်တော် စိုလေမန် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်) အထုပ္ပတ္တိ တွင် ပါသော Hud Hud (ခေါ်) ဘီးတောင် ပို ငှက်
အလ္လာဟ် အသျှင်မြတ် သည် ဗန်ဒါဟ် (ကျေးကျွန်) များနှင့် အဘယ်မျှ နီးကပ်တော် မူပါ သနည်း။
နဗီတမန်တော်ရှိုအိုင်းဗ် (အ) အကြောင်း
“ဟဂ်ျရိအပ်စ်ဝဒ် ကျောက်နက်တုံး၏ ထူးခြား ဆန်းကြယ် ဖြစ်ရပ်များ”
Categories Select Category ကွရ်အန်ကဏ္ဍ (6) တမန်တော်ကဏ္ဍ (19) ဒုအာများ (8) ဓမ္မသတ် ဖတ၀ါ (3) ပုဂ္ဂိုလ်ထူးကဏ္ဍ (3) မစာအိလ် ရှင်းလင်းချက် (9) သမိုင်း (10) ဟာဒိစ်ကဏ္ဍ (3) အထူးကဏ္ဍ (32) အာကီဒါ ယုံကြည်ချက် (2) ဆောင်းပါး (41) English Version (7) Articles (2) Duaa (2) History (2) Masa-il (1) Quran (1) Specials (2) Link (2) Notes (12) Photos (10) Untags (51) Video (1) Website (1)
ယခင်ပိုစ်များဖတ်ရန် Select Month January 2014 (3) November 2013 (47) October 2013 (1) January 2013 (30) December 2012 (2) August 2012 (6) January 2012 (34) October 2011 (2) September 2011 (19) June 2011 (7)
Pure Sunni’s Page
Most impotant Article: အရေးကြီးဆောင်းပါးများ
ရှဗ်ဗိဘာရာသ်ည The Night of Forgiveness
Quran Translation in Burmese (1-15): ကွရ်အာန်မြန်မာဘာသာပြန်
Quran Translation in Burmese (16-30) : ကွရ်အာန်မြန်မာ ဘာ သာ ပြန်
Visitors’ Countries လာဖတ်သောနိုင်ငံ့အလံ
Total Guests Visited, လာဖတ်သော ဧည့်သည်ပေါင်း
Da'wah in Myanmar
Dr. Hla Hla Win's Page
Fattwa (Islamic Q & Ans)
Free Islamic Video
Islam in World Languages
Myanmar Muslim Media
Quran in Burmese
Quran; Arabic, English and Urdu
Tanzil Quran – Multi Languages Translation
The Noble Quran & Translation